Ememe ezumike nke Disney Resort na-akpọ ndị ọbịa òkù ka ha nwee mmemme na-enye obi ụtọ |
Home » Akụkọ njem » Ememe ezumike nke Disney Resort na-akpọ ndị ọbịa òkù ka ha nwee mmemme na-enye obi ụtọ
Ememe ezumike nke Disney Resort na-akpọ ndị ọbịa òkù ka ha nwee mmemme na-enye obi ụtọ
Ọ bụ oge maka emume dịka ezumike dị na Disneyland amalite November 10, na-akpọ ndị ezinụlọ na ndị enyi ka ha mee ncheta anwansi.
N’afọ a, ndị ọbịa ga-enwe ọ moreụ karịa ka ha na-eme emume dịka ha na-achọpụta ememme ọhụụ nke ọhụụ, ya na egwu, egwu, nri na emume ezumike na-enye obi ụtọ sitere na ọdịnala ọdịnala sitere n’akụkụ ụwa.
Ihe ohuru ohuru a bu oge ezumike dika “World of Color — Season of Light,” nke bu oge ezumike n'abali nke g’eme ndi obia ji egwu ezumike ha ji egwu egwu. Nke anọ nke ọhụụ ọhụrụ nke "World of Color" na-emepụta echiche efu n'oge oyi na-enweghị atụ na akụkọ anwansi, ọkụ na-egbukepụ egbukepụ, lasers na ndị na-akọwapụta ihe dị elu, yana isi iyi ndị gbara agba dị ka ụkwụ 200 iji mepụta nnukwu ihu mmiri. Princess Elena nke Avalor na-emekwa ka ya mpụta mbụ na Disneyland Resort n'oge Ememe Ememe, na-eme ihe ngosi na agba agba cavalcade.
Oge ezumike na Disneyland Resort bụ oge ọtụtụ ndị ọbịa na-eme dị ka ọdịnala kwa afọ, na-eleta ogige ntụrụndụ maka Disney-themed emes, snowfall na Main Street USA, ọmarịcha ịchọ mma na ezumike ezumike. N'afọ a, ndị ọbịa ga-ahụ Santa Claus dị ka ihe ọchị, ebe ọhụrụ dị na Disney California Adventure Park, na Redwood Creek Challenge Trail, ndị ọbịa na Disneyland Park ga-enwekwa obi ụtọ ụdị mgbanwe dị iche iche nke mepụtara "ọ bụ obere ụwa" Ezumike, Jingle Cruise na Ezigbo ezumike ezumike. Ugbu a na-eme ememme ezumike nke iri abụọ, "ọ bụ obere ụwa" Ezumike agbakwunyela "20s zoro ezo" maka ndị ọbịa ị ga-achọpụta na njem ha.
Na Disney California Adventure Park
• Ememe ohuru nke ezumike na-eme ememme ezumike nke ọdịbendị dịgasị iche iche na egwu, ịgba egwu na ọrụ aka, gbakwunye nri na Ahịa Azụ oriri. Usoro ntụrụndụ nke ụbọchị a gụnyere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mmemme 50 nke ngosi itoolu pụrụ iche, yana ihe odide Disney pụrụ iche, nnọkọ n'okporo ámá, cavalcades, nzukọ egwu na ịgba egwu. Ememe ndị a gụnyere Diwali, Hanukkah, Kwanzaa, Christmas / Navidad na Kingsbọchị Ndị Eze Atọ. Ndị ọbịa nwere ike ịchọ ngosipụta nke egwu egwu ọdịnala nke India nke na-ewulite oriri na otu Bollywood, otu egwu Klezmer nwere ụda ọhụụ zuru ụwa ọnụ, Mariachi Divas na otu otu olu cappella nke na-etinye ụda R&B na egwu ezumike.
• Princess Elena, onye mbụ Disney Princess nke sitere na ọdịbendị Latin America dịgasị iche iche, ga-eme Disneyland Resort mbụ ya dị ka akụkụ nke Ememe Ememe. Ọ ga - abụ abụ na “Princess Elena's Musical Grand Arrival,” ọ ga - egosi na ọnọdụ ekele ndị agwa. Ndị ọbịa ga-amata nwata a nwere obi ike ma dị egwu site na usoro Disney Channel "Elena of Avalor."
• Disney na-ewu ewu ¡Viva Navidad! na-alaghachikwa dị ka akụkụ nke ntụrụndụ na Ememe Ememe, na njedebe magburu onwe ya iji mee ememme Kingsbọchị Atọ nke Ndị Eze (Dia de los Reyes). Ememme pụrụ iche maka Kingsbọchị Ndị Eze Atọ ga-amalite na Jenụwarị 5-8, 2017, gụnyere egwu na akụkọ na Paradaịs Paradaịs. Agwọ maka ezumike a ga-agụnye achịcha ọdịnala Rosca de Reyes.
• "ofwa nke Agba - Oge Ìhè" na-eweta mmụọ na mmụọ sitere na ezumike nke ezumike a na-adọrọ mmasị, mmiri abalị, nke nwere isi iyi 1,200 dị ike na-agbapụ mmiri dị ka ụkwụ 200 iji nyere aka n'ịkọ akụkọ ahụ. Ihe nkiri a na-egosi ihe egwu na-egosi ụfọdụ ndị ama ama egwu egwu na-eme egwu ezumike, gụnyere "Let it Snow" nke Dean Martin na "Baby, It Cold Cold" nke Michael Buble na Idina Menzel. Site na egwu ezumike oge ochie, ọchị na oge ncheta site na ihe nkiri Disney, nke a bụ ụzọ kachasị mma maka ndị ọbịa iji mechie ezumike ha.
• Jolly old St. Nick bịarutere Redwood Creek Challenge Trail maka Santa Holiday Gị. Ogwe aka ya na-enwe ọ haveụ agbanwewo ụzọ ahụ gaa ebe egwuregwu anwansi nke ezumike na egwuregwu, gụnyere ohere ndị ọbịa ga-esonye na ọkwa nke Santa.
• Ndị bi na Cars Land na-achọ mma maka ezumike ahụ, na-amalite site na whimsical "snowcar" nke na-ekele ndị ọbịa n'okporo ụzọ Radiator Springs. Adreesị ọ bụla tinyere Nsoro 66 – site na Flo’s V-8 Café ruo Luigi’s Casa della Tires –nwere ezumike ndozi na-egosi ụdị agwa “Cars” bi n’ebe ahụ.
• "Ala ahụhụ" na-agbanwe maka ezumike ahụ, dịka Flik na ndị enyi ahụhụ ya na-eji ọkụ na ihe ịchọ mma chọọ ala ha mma.
• Osisi Krismas na-egbuke egbuke, nke 50 ụkwụ na-achọ Carthay Circle, na-adọta ndị ọbịa n'ime anwansi ezumike tinyere Buena Vista Street. Osisi na ụlọ ndị gbara ya gburugburu, nke sitere na Los Angeles dị ka ọ dị mgbe Walt Disney bịarutere na 1920s, mepụta ihe ngosi nke oge ọzọ na-eji ejiji ịchọ mma.
Na Ogige Disneyland
• Ndị odide Disney na-eme ememme ahụ na oge "A Christmas Fantasy", usoro a na-eme kwa ụbọchị na-ese n'elu mmiri, egwu, na-aga "ndị agha tin" na oge ezumike. Santa, onye na-eme nzuzu na paradaị ahụ, ga-ahụkwa ịnabata ndị ọbịa na ọnọdụ ya pụrụ iche na Critter Country mgbe ọ gara Disneyland.
• kpochapụwo Ihi ụra Beauty si Winter Castle brightens ogige nightly na kpokọtara snowfall oge tinyere Main Street, USA, mmechi na "Kwere… na Ezumike Ime Anwansi" ezimezi oku na-akpali akpali snowfall n'ikpeazụ.
• ọkụ na-enwu enwu, ihe ịchọ mma ezumike na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe ịchọ mma 1,800 na-achọ osisi Krismas na-ekwo ekwo na Town Square, Main Street, USA, ebe dị mma maka ndị ọbịa ịmalite ọdịnala ezumike ha. Osisi Krismas na-aghọ ebe mara mma maka ndị ọbịa iji were foto ezumike ha, nso ma ọ bụ jiri ụkwụ 60 niile nke osisi na-enwu gbaa.
• Na Fraịdee, Nọvemba 18, ndị ọbịa na ndị otu nọ na Disneyland ga-eme emume ncheta ọmụmụ nke Mickey Mouse, na-eto ya mgbe ọ pụtara na cavalcade ụbọchị ọmụmụ pụrụ iche na-aga n'ihu "A Christmas Fantasy".
• Ndị ọbịa Disneyland ga-achọ ịnweta mgbanwe oge a na-ewu ewu nke ogige ntụrụndụ ndị a:
o “obu obere uwa” wee buru “obere uwa” Ezumike maka oge nke iri abuo, na eme emume umuaka n’uwa niile na omenala ezumike ndi obodo ha di iche. (A malitere isiokwu ezumike ahụ na 20.)
o Haunted Mansion na-anọgide na-anyụ Ezumike Ezumike, ya na Jack Skellington na ndị enyi ya si Tim Burton si “The Nightmare Tupu Christmas” na-eme ka a nkukota n'etiti Christmas na Halloween.
o Jungle Cruise gbanwere n'ime Jingle Cruise, ka ndị na-agba ọsọ jungle na-achịkọta onyinye ezumike na ihe ịchọ mma iji mee ka ọdịdị ala ndị jupụtara na mmiri gbara gburugburu ụgbọ mmiri ha.
Shoppinglọ ahịa Downtown Disney, ebe iri nri na ebe ntụrụndụ na Hotels nke Disneyland Resort na-esonye n'ememe ezumike ahụ na ọkụ ọkụ na ịchọ mma, ngosipụta ezumike, ntụrụndụ pụrụ iche na nri ezumike na menus menu. Otu ihe pụtara ìhè bụ ụlọ gingerbread n'ụlọ ndị ọbịa nke Disney's Grand Californian Hotel & Spa. Ezubere iji yie mputa nke họtel ahụ n’onwe ya, ụlọ gingerbread na-anọ mita asaa na isii n’ogologo na ama iri na abụọ n’obosara. A na-ere nri nri ezumike, cider na chocolate dị ọkụ na windo n'ụlọ gingerbread.
Anọgidela Na-anyụ Holiday Holiday sitere n'ike mmụọ nsọ '' Tim Burton's Nightmare Tupu Christmas.